DAAWO SAWIRRO: Laba Nin Al-Shabaab oo maanta Askari ku toogtay Muqdisho oo la qabtay, lana soo bandhigay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Laba Nin Al-Shabaab oo maanta Askari ku toogtay Muqdisho oo...
DAAWO SAWIRRO: Laba Nin Al-Shabaab oo maanta Askari ku toogtay Muqdisho oo la qabtay, lana soo bandhigay
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa galabta saldhiga booliska ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir lagu soo bandhigay laba nin oo dhallinyaro ah oo Arbacadii maanta lagu qabtay degmadaasi, ka gadaal markii ay toogteen askari ka tirsan ciidamada booliska.
Gudoomiyaha Degmada Wadajir Cabdiraxmaan Maxamed Macalin Cali, ayaa sheegay in ciidamada amniga ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan labadaasi nin, wax yar uun ka dib, markii ay dileen askari ka tirsan Ciidamada Booliska.
Ibraahim Cumar Mahadalle (Ibraahim Dheere) oo ah ku-simaha gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna gudoomiye Kuxigeen Dhinaca Maaliyadda ee Maamulka Gobolka Banaadir, oo ku sugnaa goobta labadaasi nin lagu soo bandhigay ayaa sheegay in la horgayn doono sharciga.
Ibraahim Dheere ayaa sheegay in labadaasi xubnood ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab, isla-markaana ay wejihi doonaan cadaaladda.
Si kastaba, tani ayaa yareynaysa eedeymihii inta badan loo jeedin jiray ciidamada ammaanka, ee ahaa in ay ka hortaggi la’yihiin amaba soo qaban la’yihiin Shabaabka bastooladaha la cararaya, ee dilalka ka gaysanaya Magaalada Muqdisho.
Cabdiraxmaan Maxamed Cali Nuur
lagu soo bandhigay